Uye pakupedzisira watchOS 3 beta 5 iyo inowanikwawo | Ndinobva mac
Uye pakupedzisira watchOS 3 beta 5 iyo inowanikwawo
Ichokwadi ndechekuti kuvhurwa kweiyi beta vhezheni yeApple kwakatibata zvakatishamisa, asi izvi zvakanaka sezvo zvirokwazvo kambani ichatora mazuva mashoma ezororo uye isu hatizove nemabheja ekare akaiswa pane edu zvishandiso uye vanogadzira vane imwe nguva yekuwana zvinogona kukanganisa kana matambudziko. Pane ino chiitiko, iyo nyowani beta yeApple Watch hairatidze shanduko dzinozivikanwa maererano nekushanda, asi ichokwadi kuti sarudzo kiinura iyo Mac kubva kuApple Watch pachayo.
Iyo nyowani vhezheni yeWOSOS 3 beta 5 inotiratidza kuti havamire kuburitsa chero vhezheni panguva imwe chete, vhiki rega rega kuti shanduro nyowani dzinosvika kune akasiyana masisitimu dzinoteedzerwa kudzamara shanduro dzekupedzisira dzaburitswa, nenzira iyi vanokwanisa kusunga. mitsara yakati wandei yakavhurika pakati pemidziyo. Panyaya yeApple Watch ipapo iwo beta anofanirwa kuenda zvinoenderana neIOS, aine macOS Sierra uye zvinopesanaIyo chete inogona kuve yakanyanya kuzvimiririra ndeyeApple TV software, tvOS, sezvo ichienderana kwazvo nemimwe midziyo. Chero zvazvingaitika, kuvandudzwa kwewatchOS 3 beta 5 inogara iri mubeta uye tinovimba shanduro dzekupedzisira dzichaburitswa pamwechete.
Shanduro dze beta dzakaburitswa masikati emusi weMuvhuro, dzinotiratidza kuti kambani yeCupertino inoda kuenderera mumutsara mumwe chete iwo wanga uripo kusvika zvino, uye ndezvekuti kunyangwe chiri chokwadi kuti shanduko hadzisi kuoneka, kuchengetedza system uye kugadzikana kwekuvandudza yemidziyo inotora yakawanda yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Uye pakupedzisira watchOS 3 beta 5 iyo inowanikwawo
Apple isingatarisirwi Mauto Patent: MagSafe eMatangi (WTF!)
tvOS 10 inosvikawo kune yechishanu beta